केही दिनमै सरकारलाई अल्टिमेटम दिन्छौँ : बाबुराम भट्टराई | Ratopati
केही दिनमै सरकारलाई अल्टिमेटम दिन्छौँ : बाबुराम भट्टराई
personबबिता शर्मा exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २३, २०७६ chat_bubble_outline1
केही पनि छैन । उहाँहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभयो, त्यहाँ संविधान संशोधनको संकेत कहीँ छैन । बरु उल्टै संविधान सर्व स्वीकार्य भैसक्यो भनेर दम्भपूर्ण ढंगले आइरहनुभएको छ । संघीयतासम्बन्धि संविधानलेनै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कटौती हुने गरी ऐन बनाइराख्नुभएको छ । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोग मार्फत नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीको विज्ञापन गरिएको छ । त्यसले हिजो दिँदै आएका समावेशीताको संख्यालाई कटौती गरेर संघीयताको मर्म विपरित जाने प्रयत्न भएको छ । त्यसकारण सरकार सकारात्मक दिशातर्फ हैन उल्टो दिशातर्पm गएको हामीले अनुभूत गर्छौं ।
सहमति भएको बर्षदिन नाघिसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो दिएन । त्यसकारण अब अहिलेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पुन एकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र अल्टिमेटम दिन्छौँ । त्यसपछि पनि कुरा सुनेनन् भने सडकमा आएर आन्दोलनको बाटो लिन्छौं ।
हा हा हा.......भेटघाट कुराकानी हुन्छ । गम्भीर ढंगको कुराकानी त हुन पाएको छैन । त्यै पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो छ । पोलिटिकल सम्बन्धको कुरा गर्दा उहाँले गलतबाटो लिनुभयो । वास्तवमा उहाँ एमालेमा विलय हुनु भएकै हो, जतिसुकै भनेपनि । नामले मात्रै कम्युनिष्ट भन्ने बेग्लै कुरा हो । उहाँ यथास्थितिवाद र प्रतिगमनतिर फर्किनु भएकै हो । र उहाँमा विचार नीतिका कुरा भएको देखिदैन, खाली उहाँहरुको पदको भागवन्डाका मात्रै कुराहरु आउँछन् । दुःख लाग्छ, तेत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेता भैसकेको व्यक्तिलाई गुमाउनुपर्दा ।
June 7, 2019, 2:57 p.m. एउटा जनता
यो दलाललाई घ्यु नपचेको हो। कि अल्टिमेटम मात्र, सरकार छोडेर हिंडे हुँदैन र? की तिम्रा मालिकहरुले उक्त आदेश दिएका छैनन? भन कुन कुन बिदेशी मालिकको आदेश चाहिएको छ तिमीलाई? तिम्रा कुरा सुन्दैनन् जनताले अब। तिमि देश बिगार्ने बेदेशी एजेन्ट हो भनेर सबै जनताले बुझे सके अब।